ပုထုဇဉ်လှိုင်း: July 2012
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တစ်ပတ်ကြာ (3)
နေ့ကျော် မှတ်တမ်း (11)
သိချင်ရင် နောက်နေ့ လာခဲ့
ဒီမှာ လက်မှတ် ထိုးပါ….ဒီ ကတ်လေးယူသွားပါ….
ရော့…... ဒီစာရွက်ကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်တာ လုပ်ခဲ့ပါ….. အပေါ်ဆုံးသုံးချက်ကိုတော့ ဒီမှာ ရနိုင်တယ်… သုံးထောင်ကျမယ်…..
စာမူ(၄)မူနှင့် စာရွက်စာတမ်းကိုင်၍ ငရဲခန်းသို့ ချီတက်လာသည်၊ ရုံးရှေ့က သစ်ပင်အောက်ရှိ ပွဲစားဟုထင် ရသော သူ များထံ ချဉ်းကပ် စနည်းနာလိုက်သည်။
ပါတယ်….ဟိုလေ ဇွန်လကစပြီး စီစစ်ရေးက အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး….မှတ်ပုံတင်တာပဲ လုပ်တော့မယ်ဆို
သတင်းတွေတော့ ထွက်နေတာပဲ…ရုံးမှာ ညွှန်ကြားချက် မရှိသေးဘူး…..ဒါနဲ့ ညီလေးက အစ်ကိုတို့ကို အပ် မှာလား….
စာမူကျပြီးမှ တင်ရမယ်….အစ်ကိုတို့ လုပ်မယ်….အခု ပေးထားခဲ့….စာမူတင်ရင်း ပြထားလို့ ရအောင်….
နှစ်သောင်းပဲ…..အားလုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးမယ်….
အစ်ကိုရေ….ကျွန်တော်လည်း အတွေ့အကြုံရအောင် ကိုယ်တိုင် လှုပ်ရှားကြည့်ဦးမယ်
ဘာသာရေးစာမူလက်ခံသောဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ ရုံးအတွင်း(၁၀)နေရာခန့် လှည့်လည်ပြသပြီး
ရော့…..ဒီနှစ်မူကို ကမ္ဘာအေးသွားတင်….တစ်မူကို ဒီ ပြန်လာပို့ ရမယ်….
မသွားတတ်ရင် ဒီမှာလည်း သွားပေးတဲ့ လူတွေ ရှိတယ်….
ရတယ်…..ကိုယ်တိုင်ပဲ သွားလိုက်ပါမယ်….ဒါနဲ့ ဒီမှာ ဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲ
မပြောတတ်ဘူး….လူကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် စီစစ်မှာ ဆိုတော့……တစ်ခါတစ်လေ ကမ္ဘာအေးမှာလည်း ကြာ တတ်တယ်…
အစ်ကိုရေ….စီစစ်ရေးမှူး သိချင်ရင်တော့ နောက်နေ့ လာခဲ့….
Posted by ကိုနော at 4:09 AM0comments
Labels: နေ့ကျော် မှတ်တမ်း
ကိုနောတို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခင်မင်ရသော ဘုန်းဘုန်းလေး အိမ်ကြွလာသည်၊ ဘုန်းဘုန်းလေးသည် ဓမ္မာစရိယ အောင်ထားသည့်အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ M.A ဘွဲ့ပါ ထပ်ရထားသော ပညာတတ်ရဟန်းတစ်ပါး ဖြစ်၍ ကိုနောတို့ ကိုးကွယ်ပါသည်၊ အနေအထိုင်ရိုးသားပြီး တော်တည့်မှန်ကန် ဖြောင့်မတ်သောကြောင့် ဆည်းကပ်ပါသည်၊ တစ်ခါတစ်လေ မျှော်လင့် မထားသော စကားဆန်းများ မိန့်တတ်သောကြောင့် ခင်မင်ရ ပါသည်။
ဘုန်းဘုန်း အင်တာနက်မှာ စာတွေ ရေးနေတယ်ဆို
ဘာအတွက် ဘာတွေ ရေးနေတာလဲ ဘုရား
တောင်ရောက် မြောက်ရောက်ပါပဲ….ဘာအတွက်မှ မဟုတ်ဘူး….လက်ယားလို့ ရေးနေတာ….
ကလောင်က ဘာတဲ့လဲ ဘုရား
ဟာ…ဘုန်းဘုန်း ကလောင်ကြီးက မမိုက်လိုက်တာ…..သူများတွေဆို ကြည့်….ကလောင်တွေ ဘယ် လောက်လှလဲ… ဓမ္မစေတီ ဓမ္မဘေရီ ဓမ္မဒူတ ဓမ္မဂင်္ဂါ ဝီရသူ ရဝေနွယ် ကောင်းဆုဝေ ရွှေပါရမီ ရွှေဗျိုင်းနား သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့် ကြာတစ်ပွင့် ဗောဓိတစ်ထောင် ပန်းတစ်ပွင့်တောင် မေတ္တာရှင် ဒယ်အိုး မောင်ချစ်ညို ကိုးဘွဲ့ရ သံဝေဂ အဲဒါတွေ အများကြီးပဲ…. လှတပတတွေချည်းပဲ
သူ့အကြောင်းနဲ့ သူပေါ့လေ….ဘုန်းဘုန်းကတော့ ပိန်ပိန်မို့ ကိုပိန်လို့ မှည့်လိုက်တာပဲ….ရှေးတုန်းက ဆရာ တော် ဦးကြယ် ဦးကြည် ဦးရန်ကုန် ခင်ကြီးပျော် စတာတွေ ရှိတယ်မဟုတ်လား….ဘုန်းဘုန်းက ငယ်သေး တော့ ဦး မတပ်ဘဲ ကို ထည့်လိုက်တာတစ်ခုပါ ရှေးနည်းပါပဲ…..
ကလောင်လှတော့ လူရှိန်တာပေါ့ ဘုရား….ပိန်တိုင်း ကိုပိန် မှည့်စရာလိုလို့လား ဘုရား…. သံဝေဂဆရာ တော် ဓာတ်ပုံ ကြည့်ပါလား…..ကလောင်ကသာ သံဝေဂ….ပြင်ထား ဆင်ထားတာ ဖိုးချစ် သာသာရယ် သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ ဆိုနေပါမှ….ဒကာတော်က ခက်နေပါပြီ…..ကဲ ကြွလာရင်းကိစ္စကို ပြောရဦးမယ်….
စာအုပ်လေး တစ်အုပ် လုပ်ချင်လို့…..အဲဒါကို ဒကာကပဲ ဆောင်ရွက်ပေးပါ…..
ဒီမှာ စာမူကြမ်း….ရော့….ဒါက မူရင်း.. ထားဝယ်က ဆရာကြီး ဦးကျော်ရှိန်ရဲ့ ကျမ်းစာ…. ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာနှင့် ရှင်ဗုဒ္ဓ ဃောသတဲ့…
ကျမ်းစာဆိုတော့ အတော်မြင့်မှာပဲ ဘုရား…..တပည့်တော်တို့ ဘယ် နားလည်ပါ့မလဲ
အချုပ်ကတော့ အများသိထားတဲ့ ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာကို ရှင်ဗုဒ္ဓဃောသရေးတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး….လို့ ပြောချင်တာ အဲဒီအချက်ကို သုတေသနလုပ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ယူခဲ့တာပေါ့….. အဲဒီတော့
အဲဒီတော့ ဒကာတော်က မူရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး စာအုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ….ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘုန်းဘုန်းက ထုတ်ပေးမယ်….
ဆင်ဆာတို့ သာသနာရေးတို့ လိုသေးတယ် မဟုတ်လား
မှန်ပါ….မှန်ပါ…ဆင်ဆာဆိုတာက စာရေးဆရာရဲ့ မိစ္ဆာ၊ စာပေလောကရဲ့ ငရဲခန်းဆို ဘုရား… လွယ်ပါ့ မလား
ခုခေတ်မှာ အဲသလောက် မဆိုးတော့ပါဘူးလေ….လွှတ်တော်သတင်းတွေ မဖတ်ဘူးလား…..ထုတ်/တင်တို့ တင်/ ထုတ်တို့ ပေါ်နေပြီလေ…..
အေး…..လုပ်သင့်တာ လုပ်လိုက်….လက်ဆောင်ပေးစရာရှိရင် ပေးလိုက်….ကန်တော့စရာရှိရင် ကန်တော့ လိုက်…. စာအုပ်အမြန်ထွက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်….ဆရာကြီးက အသက်(၉၀)ကျော်နေပြီ ကြွဦးမယ်
Posted by ကိုနော at 3:31 AM 1 comments
ဖေကြီးရေ…ညက ဒေါ်မာဂရက်ကြီး ဆေးလိပ်ထိုင်ဖွာနေတာ တွေ့တယ်တယ်တဲ့….
ခေါင်းရင်းအိမ်က သူငယ်ချင်း ပြည့်ပြည့်ပြောတာ…..
ဒီလိုပဲ သားရေ….သရဲတစ္ဆေတွေ့ကြတယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် တဆင့်ခံတွေများတယ်….
ဖေကြီးလည်း နှစ်ပေါင်း(၄၀)အတွင်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး….ကြားဖူးတာတော့ အများကြီးပဲ
သားကတော့ ကြောက်တယ်….ညဘက် ဆိုင်က ပြန်လာရင် အောက်ထပ်ကို မကြည့်ရဲဘူး….
သားကြောက်တတ်မှန်းသိလို့ စတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ
သူများတွေလည်း တွေ့ကြတယ်တဲ့…..သရဲဆိုတာ တကယ်ရှိတာလား….
ရှိချင် ရှိမယ်သားရယ်…..ဒါပေမယ့် ကြောက်စရာတော့ မလိုဘူး….ဘုရားစာလည်း ရွတ်ရတယ်သားရဲ့….
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့…ကြားလား….ဒို့အိမ်ကိုတော့ ဘယ်သရဲမှ မလာရဲဘူး…သိလား….
ဖေကြီးတို့ နေ့တိုင်း ပဋ္ဌာန်းတို့ ဒိဝါ တပတိတို့ ရွတ်ဖတ်နေတာလေ….
သင်္ဃန်းကျွန်းဆိုသောအရပ်တွင် ၄၀×၆၀ မြေကွက်ကြီး၌ ဒေါ်မာဂရက်မည်တွင်သော အဖွားကြီးတစ်ဦး နေ ထိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ အဖိုးကြီး ဆုံးပါးသွားပြီးကတည်းက တစ်ဦးတည်းနေထိုင်လာခဲ့သဖြင့် အထီးကျန်ခြင်းနှင့် အသားကျနေပြီးသူလည်း ဖြစ်သည်။
တူတော်မောင်တစ်ဦးရှိသော်လည်း ခပ်ကင်းကင်းပင်။ ခြံဝင်းအတွင်း တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် နားအေး ပါးအေး ရှင်သန်နေသူဖြစ်သည်။ မြေတွေ ရွှေဖြစ်နေသော်လည်း သူ့ခြံလေးကို မစွန့်လွှတ်ရက်။
သွားလေသူ နည်းတူ ဤမြေတွင်သာ ခေါင်းချလိုသည်။
ခေတ်အခြေအနေအရ မြေမပြောင်းဘဲ အခြေကောင်းဖို့အတွက် ကန်ထရိုက်လက်ထဲ အပ်လိုက်ရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်က အပြတ်ရောင်းလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းသော်လည်း အရာမထင်။ အောက်ထပ်နေပြီး အပေါ်ထပ် တွေကို ငှားစားမည်။ စိုက်ပျိုးနေစရာ မလိုတော့….ဒါလည်း ကောင်းတာပဲ….အိုကေ…..။
လောလောဆယ်ဆယ် ပြေလည်ဖို့ အချို့ကို ကြိုပွိုင့်ဖြင့် ရောင်းပြီး အနီးအပါး ငှားနေလိုက်သည်၊ ကိစ္စမရှိ…. ကိုယ့်မြေ ကိုယ် ပြန်နေရမှာပဲလေ….။
ကံကြမ္မာဟူသည် အားနည်းသူကို ဖိထောင်းတတ်သည့် အလေ့အထရှိသည်။ လောကကြီးကလည်း အေး အေးနေသူကို ဆောင့်ကန်တတ်လေသည်။
သုံးထပ်ခွဲတိုက်မပြီးမီ ကန်ထရိုက်တာနှင့် ပြဿနာ တက်လေပြီ။ ရုံးကန်ကနား ရောက်တော့သည်။ တစ်ဦးတည်းပင် ရင်ဆိုင်သည်။ ကိစ္စမရှိ…..ကိုယ့်မြေမှာနေပြီး ကိုယ့် မြေမှာသေရဖို့ အရေးကြီးသည်။
လက်ကျန်ငွေကို မနက်ဖန်အတွက် ခြစ်ကုတ်ရင်း…. အမှုရင်ဆိုင်ရင်း…. ကိုယ့်မြေ ကိုယ် ပြန်လည်တမ်းတ ရင်း…..သွားလေသူကြီးကို လွမ်းဆွတ်ရင်း….. သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာကို အလျားလိုက်ဖြတ်ကူးရင်း…. အထီးကျန်ခြင်းနှင့် ဖက်လည်တကင်း ပေါင်းသင်းရင်း အားလုံးကို မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရတော့သတည်း…..။
ဘုမသိ ဘမသိမိသားတစ်စုသည် သင်္ဃန်းကျွန်းဟု ခေါ်တွင်သောအရပ်၌ ၄၀×၆၀ မြေကွက်ရှိ သုံးထပ်ခွဲ တိုက်မှ ခန်းတစ်ခန်းကို ကန်ထရိုက်တာသူဋ္ဌေးကြီးတစ်ဦးထံမှ ငှားရမ်း၍ လာရောက်နေထိုင်ကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အထူးအဆန်း အရူးအနှမ်းတွေဟု ယူဆကြပုံရသည်။ ဘုရားစာရွတ်ဖတ်သံများကို နားစွင့် ရင်း ထွက်ပြေးမည့်အချိန်ကို မှန်းဆကြည့်နေကြသည်။
ဟေ…….တု ပစ်…..စ……ယေ….န ပစ် စ ယော….ဟော….ဟော….ဟော…..။
ဟေ…………တု အဟွတ် အဟွတ် စယော ဟောဟောဟော…..။
ငါ့ကို မီးခြစ် ငှားပါဦး…….။
အိမ် မြေ နတ္ထိ
Posted by ကိုနော at 3:31 AM0comments
စားဖို့ ရုန်းနေရသည်မို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ မသိရလိုက်ရတာတွေက များသား။
ဟိုတလောက လှုပ်ခတ်သွားသော လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာပွဲတော်မှ ဆုရဇာတ်ကားနှစ်ကားကို အခုမှ ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအခန်းဖြတ်နှင့် ကြိုး ဖြစ်သည်။
ကြိုး ကတော့ အတော်ကောင်းတယ်ဗျာ….ဆုရတာ တန်တယ်….ဆုပေးတဲ့ သူလည်း ဂုဏ်ရှိတယ်
မကြိုက်ပါဘူးတော်…..ဘာမှလည်း မပြောဘူး….နားမလည်ဘူး….အဲဒီအခန်းဖြတ်ကမှ မိုက်တာ….. ဘွင်းဘွင်းကြီး ပြောချသွားတာ…..ဒဲ့ပဲ…..သတ္တိကောင်းလိုက်တာနော်…. ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲ….. ခံစားနေကြရတာကိုး….
အနုပညာမှ မမြောက်တာ….ဆုနဲ့တော့ ဘယ်တန်မလဲ မိန်းမရာ
တန်လို့ ရတာပေါ့….ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ကိုယ်စား အန်တာ ဟဲ့…..
ကိုယ့်အမြင်ကတော့ တင်သန်းဦးရိုက်တဲ့ ပေါ်လစီကားတွေနဲ့ ဘာထူးလဲ….ဟိုဘက် ဒီဘက်ပဲ ကွာတာ မဟုတ်လား
တင်သန်းဦးက အလိုတော်ကျ ဖားတာလေ….
အခုလည်း ကြည့်….တစ်ဖက်သတ်ပဲ မဟုတ်လား…..ဘာပညာသားပါလဲ….ဆုပေးတဲ့အဖွဲ့ကို အထင်ကြီး ထားတာ…. အကယ်ဒမီပေးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ အတူတူပဲ…..အေးလေ သူတို့လည်း ဒီရေ သောက်ကြတာပဲဟာ... ဒီလောက်ပဲပေါ့
ဘာလဲ…..ရှင်က ဘာမို့လို့ နာနေတာလဲ……ဘယ်လောက် တတ်နေလို့လဲ….
တတ်လို့ နာလို့ မဟုတ်ပါဘူး….ထင်ထားသလို မဟုတ်လို့ ပြောနေတာ
ရိုက်ရဲတဲ့ သတ္တိကို ဆုပေးတာ….မှတ်ထား….
ဒါဆို….ကိုယ်တို့ ရိုက်ထားတဲ့ကားလည်း သွားပြိုင်ရင် ဆုရမှာ သေချာတယ်နော်….. ဘွင်းဘွင်းပဲ…. သတ္တိ ရှိရှိနဲ့ ဒဲ့ဒိုး တင်ပြထားတာ....ပြည်သူ့ကိုယ်စား အန်ထားတာတွေ
ဘာမို့လဲ….ဘယ်တုန်းက ရိုက်ထားတာလဲ…..လျှောက်မလုပ်နဲ့ ယောင်္ကျား ကားသွားမယ်…..
ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးကွာ…..မင်္ဂလာဦးညတုန်းက ကိုယ်တို့ ရိုက်ထားတဲ့ ဇွတ်ကိုကိုဇာတ်ကားပါ။
Posted by ကိုနော at 12:41 AM0comments
ကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ထားဝယ်ရောက်ခိုက် လူကြီးသူမများကို လိုက်တွေ့ဖြစ်သည်။
မောင်နောလေး…လာ လာ…နင်တို့ လာမှ တွေ့ရတာလေ….လူကြီးတွေက ထသွား ထလာ မလွယ်ကြ တော့ဘူး မဟုတ်လား… အလည်ပဲလား…
မဟုတ်ဘူး ကြီးကြီး…..အခွန်ရုံးလာတာ….ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူး သွားမလားလို့ပါ
အော်…..အခွန်ရုံးသွားရင် ငွေကြေးပေးရတယ် ကြားတယ်…အသိတွေ ဘာတွေရှိလား….
မရှိဘူး ကြီးကြီး….ကိစ္စ မရှိဘူး ကြီးကြီး….ကြည့်လုပ်လိုက်ပါ့မယ်
မဟုတ်သေးဘူး…..မလိုအပ်ပဲ အကုန်မခံနဲ့…နေဦး…..မောင်ရင့်တူကို မေးကြည့်ပါဦးမယ်….
ကျော်ကျော်က လ.ဝ.က ဆိုတော့ ရုံးမှ မတူတာ….နေပါစေ….ဒါနဲ့ ကျော်ကျော်က နယ်စပ်မှာ တာဝန်ကျနေ တယ်ဆို
ဘယ်ကြာမလဲ….မောင်ရင့်တူက သိန်း(၃၀)ပဲ ပေးတာကိုး…..
အဆင်ပြေတယ် ပြောတာပဲ….သိန်း(၅၀၀)ပါလာတယ် ကြားတယ်….တို့ မမြင်ရ မစားရပါဘူး….ဟိုရှေ့မှာ တိုက် ဆောက်နေကြတယ်….မောင်ရင် ဝင်လာတော့ မတွေ့ခဲ့ဘူးလား….
သတိ မထားမိဘူး ကြီးကြီး
သူတို့ အဆင်ပြေနေတာကိုပဲ ကျေနပ်နေရတယ် မောင်ရင်ရေ…..သူ အလုပ်စဝင်တုန်းက အရာရှိကန် တော့ဖို့ စိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ (၆)သိန်းတော့ ပြန်ပေးရှာပါတယ်….တော်သေးတာပေါ့လေ….
အခွန်ရုံး မသွားမီ ရဲထောက်ခံချက်လိုအပ်သဖြင့် မြို့နယ်ရဲစခန်း၌ တစ်ထောင်တန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံစာကိုပြ၍ ရဲထောက်ခံချက် ယူလိုက်သည်။ တာဝန်ကျရဲသားမှ လွယ်လွယ်ကူကူပင် ထုတ်ပေး ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး ရဲစခန်းမှ အထွက်…တာဝန်ကျရဲသားလေးလိုက်လာပြီး….
အစ်ကို…..စာရွက်စာတမ်းဖိုး နှစ်ထောင်ကျတယ်…အဲဒါ ရှင်းခဲ့ဦး….
ဟိုက်….မင်း စာရွက်က ဈေးကြီးလှချည်လား…..ရော့ နှစ်ထောင်
တစ်ထောင်တန် ထောက်ခံချက်နောက်တစ်စောင်နှင့် နှစ်ထောင်တန် ထောက်ခံစာတို့ကို ဆုပ်ကိုင်၍ အခွန်ရုံးသို့ ချီ တက်လာသည်၊ အခွန်ဦးစီးမှူးက စီစစ်သည်၊
ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာ ရောင်းတာ….
ဘယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်…. ဆောင်ရမှာပဲ
အဲဒါက သတ်သတ်ပဲ…..မင်းမှာ အိမ်ရှိတယ် မဟုတ်လား
မင်း မိဘမှာ ရှိတယ် မဟုတ်လား….
အဲဒီအတွက် ဆောင်ရမယ်….ဒီဖောင်မှာ ဖြည့်ထားတဲ့အိမ်ကို ကြည့်ပြီး တွက်ရဦးမယ်….ကြာပါတယ်လေ… ငါ အဆင် ပြေအောင် လုပ်ပေးလိုက်မယ်….ငါကိုတော့ ဘာမှ ပေးစရာ မလိုဘူး…ရုံးမှာ လိုအပ်နေတဲ့ စတီး(လ်)ကုလား ထိုင်တစ်လုံးတော့ လှူခဲ့….မင်းတို့လို ဧည့်သည်တွေ လာတဲ့ခါ….အစည်းအဝေးရှိတဲ့ခါ ထိုင်ရတာပေါ့….နော်…
အဲဒါကို အပြင်ဘက်က စာရေးကြီး ရှင်းပြလိမ့်မယ်….
ကိစ္စဝိစ္စတွေ ပြီးသောအခါ ဝဝဖိုင့်ဖိုင့် စာရေးကြီးက ရှင်းပြတော့သည်။
ဦးစီးမှူးက ကုလားထိုင်တစ်လုံး အလှူခံထားတယ်ဆို…
ကုလားထိုင်က ဟို ရှေ့က ဆိုင်မှာ ရောင်းတယ်….မင်းကိုယ်တိုင် ဝယ်လှူခဲ့လည်း ရတယ်…ဒါမှမဟုတ်
တို့ စီစဉ်လိုက်မယ်….တစ်လုံးကို တစ်သောင်းခွဲပဲ ကျတယ်…
ရော့ ဗျာ….တစ်သောင်းခွဲ စာရေးကြီးပဲ စီစဉ်လိုက်ပါတော့…..
လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံသွားသဖြင့် နှစ်ရက်ခန့် နေပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
ထားဝယ်-ရန်ကုန်ကားများ၌ ထိုင်ခုံကျဉ်းလွန်းသဖြင့် နှစ်ယောက်ထိုင်ရမည့်အရေး စိတ်အိုက်နေသည်၊
ဘေးခုံတွင် ပိန်ပိန်သေး သေး မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် လာထိုင်၍သာ အနည်းငယ်စိတ်သက်သာရာ ရ တော့သည်။ အဝေပြေးဂိတ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး မကြာမီ နောက်ဘက် ထိုင်ခုံမှ အမျိုးသားကြီးနှစ်ဦး၏ ငြီးငြူသံ များ ကြားနေရသည်၊ တစ်ယောက်က ကိုနော ခုံကို မသိမသာ ပုတ်နေသည်၊ ကိုနောမသိယောင်ပြုနေသည်၊ တစ်ယောက် တစ်ခွန်းပြောနေကြသည်၊ အသံ တစ်သံကို ကြားဖူးသယောင်ရှိ၍ အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်၊ အားပါး…..အခွန်ရုံးက တစ်သောင်းခွဲတန် စာရေးကြီးပဲ။
တစ်နေရာတွင် ကျန်းမာရေး ရပ်နားသောအခါ စာရေးကြီး ကိုနောဆီ ချဉ်းကပ်လာသည်၊
မောင်ရင်တို့က အဆင်ပြေတာပေါ့….နှစ်ယောက်စလုံး ပိန်ပိန်ဆိုတော့….
ဦးတို့မှာက နှစ်ယောက်စလုံး ဝဖိုင့်နေကြတော့ အတော်ကို ကျပ်ကျပ်သပ်သပ်ပဲ….
ဟို ဟို မောင်ရင်အနေနဲ့ အားတော့ နာတယ်ကွာ….ခုံများ လဲထိုင်ပေးလို့ရမလား…..
မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်ဗျ….ကျွန်တော်က ပြဿနာမရှိဘူး…..ဟိုကောင်မလေးက ရှိသေးတယ်
သူလည်း ကိစ္စ မရှိလောက်ပါဘူး….မောင်ရင်တို့က လူငယ်တွေပဲ ဥစ္စာ….
ဟိုလေ…ဦးလေးရယ် ကျွန်တော်တို့က ငယ်သေးတော့ ဘယ်လောက်တန်မှန်း မသိသေးဘူး….ဦးလေးက တစ်သောင်းခွဲပဲ တန်တာဆိုတော့ ကြုံသလိုသာ ထိုင်လိုက်ပါတော့……
သူများတွေ တက်နေပြီ…..ကားပေါ်တက်စို့ စာရေးကြီး…..။
Posted by ကိုနော at 4:06 AM0comments
မအိရဲ့ ကဗျာတစ်စ , ရင်ဝမှာ ထိရှခဲ့…။
`ခုနစ်အိမ်ကြား ဘုရားဝတ်ပြုတတ်သူ မဟုတ်ဘူး….၊´
`ထမင်းစားချိန် အိမ်လည်တတ်သူ မဟုတ်ဘူး….၊´
`ငါ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး….၊´ ။
Posted by ကိုနော at 3:47 AM0comments
Posted by ကိုနော at 3:41 AM0comments
သူ မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး…
အကြင်နာ မေတ္တာ သိုမှီးရာ….၊
ငါ့တို့ အချစ်တွေ ရှင်သန်
သူ ရှိလို့ မဖြစ်ဘူး….
ငွေပြောင်သူ ပြောင်…. အိမ်ပေါင်သူ ပေါင်
ရွာပြောင်းသူ ပြောင်း…. ကိုယ်ရောင်းသူ ရောင်း
(အညွှန်း….၁၊ ထီ(ပါဠိ) မိန်းမ၊ အမသတ္တဝါ၊[တိပိအဘိဓာန်]
၂၊ ထီ..အမှတ်စဉ် ရေးထိုးထားသော ကံစမ်းမဲတစ်မျိုး။[မြန်မာအဘိဓာန်]
Posted by ကိုနော at 3:37 AM0comments
ကိုနောတို့ အရပ်တွင် ဗန်းစကားတစ်ခု တိုးလာသည်၊ တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ရင် ဦးသိန်းညွန့်ကို တိုင်လိုက်မယ် ဟု ပြောလေ့ရှိကြသည်၊ လူကြီး လူငယ် အားလုံးကြားမှာ ဟော့ဆုံး စကားလုံးဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့သ၌……
သူငယ်ချင်းတွေက တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တိုင်း ဦးသိန်းညွန့်ကို တိုင်လိုက်မယ်ချည်း ပြောနေကြလို့....
ဟုတ်လား…..မှတ်ထား သားရယ်…..ဦးသိန်းညွန့်ဆိုတာ သင်္ဃန်းကျွန်း လွှတ်တော်အမတ်လေ
တီဗွီမှာ လာတဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ လူကြီးတွေ တွေ့တယ် မဟုတ်လား
သိပြီ….သိပြီ….(၈)နာရီသတင်းမှာ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ခေါင်းညိတ်တဲ့အဖွဲ့….ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား…
ဒါဆို သမ္မတက ဘယ်သူလဲ...
သမ္မတဆိုတာ လဲလို့ ရလား...
ဒါဆို ဖေကြီး သမ္မတ သွားလုပ်ပါလား…
သမ္မတလုပ်ပြီး သားတို့ဆီ ပိုက်ဆံတွေ ပို့လိုက်ပေါ့....
သားကလဲ….ဦးသိန်းညွန့်အလှည့်တောင် မရောက်သေးဘူး….ဦးသိန်းညွန့်တောင် အော်တုန်း…..ဖေကြီးတို့ အလှည့်က အဝေးကြီးရယ်…..စိတ်မပူနဲ့ ဖေကြီးအလှည့် ရောက်ရင်တော့ ပိုက်ဆံတွေ ပို့ပေးလိုက်မှာပေါ့… ဒါနဲ့ သားလည်း လေ့ကျင့်ထား….လွှတ်တော်အမတ် လုပ်ရအောင်
အခုတော့ ခေါင်းညိတ်တာပဲ စလေ့ကျင့်ထား….ကြားလား
ယောင်္ကျားရယ်….ကလေးကို ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ…..ဦးသိန်းညွန့်ကို တိုင်လိုက်မယ်နော်….။
Posted by ကိုနော at 2:36 AM0comments
အမှားတစ်ခါ မတရားတာ မဟုတ်ပေမယ့်
ဘဝနှင့် ဆန္ဒ ဟန်မကျတဲ့အခါ….
ကဗျာဟာ မုန်တိုင်း ဖြစ်သွားတယ်…။
Posted by ကိုနော at 2:27 AM0comments
ဘယ်တော့မှ မျက်ရည် မကျစေနဲ့´တဲ့
နှလုံးသားမှာ စူးဝင် အရူးအမူးပင် ကိုးကွယ်ခဲ့…၊
မင်း ဘဝင်မအေးနိုင်တာ ငါ ဘယ်တေးနဲ့ချော့သိပ်ရပါ့…?
`ငါတို့ ချစ်လျက် ဝေးရမယ်´တဲ့….၊
ကိုယ် မဟန်တာ ကံကြမ္မာကို လွှဲချလို့ တော်ပါ့မလား…?
Posted by ကိုနော at 2:23 AM0comments
Hnin Yae Ko
ဤဘလော့(ဂ်)ကို ကိုနော တစ်ဦးတည်း၏ ဆန္ဒဖြင့် ၂၀၁၂-ခု၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ထူထောင်သည်။ ပုထုဇဉ်တစ်ဦး၏ ရောက်တတ်ရာရာများကိုသာ ရေးသားထားသည်ဖြစ်၍ ကြီးကျယ်ခြင်း,မြင့်မြတ်ခြင်းများကို တွေ့မြင်ကြရမည် မဟုတ်ပါ။ ပုံများကို Google မှ ကူးယူအသုံးပြုပါသည်။